टिकटकको कमाईले चार सय भोकालाई खाना खुवाईन गरिन गरिमाले - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी टिकटकको कमाईले चार सय भोकालाई खाना खुवाईन गरिन गरिमाले
पछिल्लो समय युवापुस्ता माथै नभई बुढाबुढी र बच्चाबच्ची पनि टिकटकमा आकर्षित छन। फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्न दिनानुदिन नेपालमा पनि टिकटक प्रयोगकर्ता बढ्दो छन।हुन त टिकटकले धेरै कलाकार, मोडल जन्माईसक्यो र केहिले चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेका छन पनि।
पछिल्लो समय सेलेव्रिटीले महामारीबाट प्रभावितलाई सहयोगी हात अघि बढाइरहेका छन् ।
Previous articleचीनमा बर्ड फ्लूको एक दुर्लभ स्ट्रेनको संक्रमण मानिसमा पुष्टि
Next articleफिफा विश्वकप र एसिया कपकाे छनोटका लागि नेपालले आज ताइपेईसँग खेल्दै